Nakaton’ny fampanoavana Tiorka ny raharaham-pahafatesan’ilay mpikatroka Azerbaijaney, Bayram Mammadov · Global Voices teny Malagasy
Hita faty tamin'ny 2 Mey tamin'ity taona ity ilay mpikatroka 26 taona
Voadika ny 27 Desambra 2021 3:13 GMT
Vakio amin'ny teny Français, українська, Español, English
Bayram Mammadov. Sary indrana avy amin'i Vahid Aliyev, nahazoana alalana.
Enimbolana taoriana nahitan'ireo mpiambina morontsika Tiorka ny vatana mangatsiaka an'ilay mpikatroka Azerbaijaney, Bayram Mammadov tao Istanbul, namoaka ny valin'ny fandidiam-paty farany ny biraon'ny lehiben'ny fampanoavana Tiorka, ka namarana tamin'ny fomba ofisialy ny famotopotorana momba ny fahafatesany. Araka ny valin'ny fanadihadiana ara-pitsaboana, maty rendrika tanaty rano i Mammadov, 26 taona.
Fantatra ao Azerbaijan ho iray amin'ireo “gadra noho ny graffiti” na “gadra noho ny sarivongana” i Mammadov. Tamin'ny 8 Mey 2016, nitondra loko atifitra i Mammadov sy Giyas Ibrahimov ka nandoko tamin'ny teny hoe “Qul Bayramınız Mübarək” (Tratra ny Andron'Andevo) sy “[angerena] ny rafitra” teo amin'ny sarivongan'ny filohan'i Azerbaijan teo aloha, Heydər Əliyev mialoha ny “Fankalazana ny Voninkazo,” andro manamarika ny daty naterahan'i Əliyev.
Kilalaon-teny ny “Qul Bayramınız Mübarək”—midika voninkazo ny “Gül” amin'ny teny Azerbaijana, raha midika “andevo” kosa ny hoe “Qul”. Rehefa voasambotra i Ibrahimov sy Mammadov ny ampitso, dia voampanga ho nitàna zava-mahadomelina izy ireo. Voalaza fa “nahita” heroina 2 kilao tao an-tranon'izy roalahy ny minisitry ny atitany. Voasazy higadra enim-bolana mialoha fitsarana i Ibrahimov sy Mammadov tany am-boalohany. Tamin'ny volana Oktobra 2016, voasazy higadra 10 taona an-tranomaizina i Ibrahimov, 21 taona tamin'izany raha nahazo sazy mitovy amin'izany tamin'ny volana desambra 2016 kosa i Mammadov, 21 taona ihany koa. Tamin'ny volana Marsa 2019, nahazo famelan-keloka izy roalahy ary navoaka ny fonja. Voasambotra imbetsaka i Mammadov ary nilaza fa nampijaliana nandritra ireo fotoana nanagadrana azy.
Tamin'ny volana Febroary 2020, namoaka didy ny Fitsarana Eoropeana momba ny Zon'Olombelona fa nanitsakitsaka andininy maromaro tamin'ny Fifanarahana Eoropeana momba ny Zon'olombelona ny fanasaziana an'i Mammadov sy Ibrahimov ary nandidy ny governemantan'i Azerbaijan mba handoa onitra 36,000 EUR (43 700 dolara Amerikana) ho fanonerana ho azy roalahy.
Nikasa hampiasa izany vola izany ho an'ny fianarany any ivelany i Bayram. Nifindra tany Istanbul izy tamin'ny volana Novambra 2020 mba hianatra teny Anglisy ary nanohy nisoratra anarana tany amin'ny oniversite tany ivelany.
Tamin'ny 29 Aprily ny fotoana nahitan'ireo namany azy farany.
Taorian'ny tatitra fahafatesany, niresaka tamina vondrona mpisolo vava mahaleotena tao amin'ny Progressive Lawyers Association ao Torkia ireo naman'i Mammadov. Tamin'ny sioka tamin'ny 7 Desambra, nizara ny fanambaran'izy ireo ny fikambanana:
Ho an'ny fampahalalam-baovao sy ny vahoaka. Ity ny fanambaranay momba ny famotorana natao tamin'ny fahafatesan'ilay anarshista Azerbaijianey Bayram Mammadov
Nilaza ny fanambarana fa raha jerena ny valin'ny fandidiam-paty, nanamafy ny fikambanana fa maty natelin'ny rano i Mammadov.
Taorian'ny fahafatesan'i Mammadov, nankany Istanbul ny rainy mba hitondra ny zanany lahy hatao veloma farany an-tanindrazana. Nalevina tamin'ny 9 Mey i Mammadov, andro mialoha ny Andro fankalazana ny Voninkazo fanao isan-taona sy daty nisamborana azy tamin'ny taona 2016.